Global Voices teny Malagasy » Venezoela: Manova Fiainana Ny Orkesitry Ny Fahatanoràna · Global Voices teny Malagasy » Print
Venezoela: Manova Fiainana Ny Orkesitry Ny Fahatanoràna
Voadika ny 04 Novambra 2018 14:35 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Vidal Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Sylvia Aimée
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Mediam-bahoaka, Mozika, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
Tamin'ny taona 1975, nanomboka niasa ho fanatanterahana ny nofinofiny i José Antonio Abreu  (amin'ny fiteny anglisy): mamorona orkestra iray ao Venezoelà. Natombok’ i José Antonio Abreu sy ireo mpianatra valo hafa tamin'ny Sekoly Fianarana Mozika tranainy José Angel Lamas, izay namorona fandaharanasa iray mifototra amin'ireo fomba vaovao enti-mianatra, amin'ny alalan'ny fampifanarahana an'ireo fomba fampianarana isankarazany, izay namaly ny tena zava-misy eo amin'ny firenena. Nampivondrona an'ireo tanora rehetra mpilalao mozika avy ao amin'ny firenena ilay fomba vaovao, ary anisan'izany ireo tanàna ao Maracay sy Barquisimeto (tanàna roa fantatra tsara noho ny mozikan'izy ireo mahafinaritra). Ny 30 Aprily 1975 no niakatra an-tsehatra voalohany ilay orkesitra. Telo amby telopolo taona taty aoriana, ankizy an-jatony, indrindra indrindra avy amin'ireo faritra tena mahantra no nandray anjara tao amin'ny orkesitra.
Ohatra amin'ny talenta sosialy, ara-mozika sy itambaran'ny kolontsaina ao Venezoela ny Fesnojiv  [amin'ny fiteny espanola] (fanafohezana ny teny hoe Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela), lazaina koa hoe “ny Rafitra”) – dia lohahevitra iray tena izy mitondra fireharehana ho an'ireo Venezoelana. Porofoiny fa mety ho afaka ataon'ireo olona avy amin'ny toerana sosialy tena samihafa (ny sasantsasany amin'izy ireo dia avy amin'ireo faritra tena mahantra indrindra sy tena maherisetra eo amin'ny firenena) ny handray sy hilalao tsara an'ireo asakanto an'ireo mpamorona avy amin'ireo firenena lavitra. Mandray anjara amin'ny fanomezana harena ny toe-panahy Venezoelana ireo tanora mpilalao mozika ireo, mikatsaka ny momba azy mandrakariva, sy ny maripamantarana azy manokana. Mahavariana ireo fampisehoana, mampihetsi-po ireo tantara, ary mahatalanjona ireo fampifangaroana sy ireo fiangaly.
Manoratra [amin'ny fiteny espanola] i Domingo:
Ireo mpikambana mpandrafitra ny orkesitra ankehitriny dia nanomboka tany anatin'ireo orkesitra eo amin'ny faritra misy azy ireo, nitohy tao amin'ireo orkesitra departemantaly sy isam-paritra. Ny sasantsasany manana lasa tao anatina fandikandalàna, fidorohana zava-mahadomelina, halatra, fiainana andalam-be, ary ho an'ny rehetra “ny Rafitra” dia midika fa famadihana ny fiainan'izy ireo mandritra ny fahazatovo sy ny fahatanoran'izy ireo. Vao roa taona monja ireo tanora indrindra mpilalao mozika ary ny salantaona dia tsy mihoatra ny 22 taona. Ny Rafitra dia nandresy tamin'ireo olana rehetra ara-tsosialy, ara-toe-karena ary ara-politika isankarazany, izay niainan'i Venezoela nandritra ny 30 taona farany, ary nahazo mandrakariva ny fanohanana avy tamin'ireo governemanta rehetra hatrany izy.
Faly tamin'ny Prix des Arts Prince des Asturies 2008 nomena ny orkesitra i Nicodemo [amin'ny fiteny espanola].
El fundador de las Orquestas Juveniles  de Venezuela, Jose Antonio Abreu, fue designado recientemente miembro honorario de la “Royal Philharmonic Society” del Reino Unido, y uno de sus ex alumnos, Gustavo Dudamel, recibió el premio al mejor artista joven del año.Son premios a la esperanza, al papel restaurador de humanidad que puede tener el arte.
Nasandratra vao haingana ho mpikambana am-boninahitra ao amin'ny Société Philharmonique Royale de Grande-Bretagne, ny mpamorona [an'ireo Orkesitry ny Tanora ao Venezoelà ], Jose Antonion Abreu, sy ny iray tamin'ireo mpianany tranainy, Gustavo Dudamel , nahazo ny loka mendrika indrindra fanome ny artista tanora nandritra ny taona. [famporisihana ho amin'ny fanantenana ireo, ary ny mety ho andraikitra raisin'ny kanto ao anatin'ny fanavotana ny maha-olombelona.]
Mitantara ny tantaran'ny Rafitra sy ny ampahany amin'ireo mpikambana ao anatiny ny lahatsary fanadihadiana Tocar y luchar (Milalao sy miady).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/04/120362/
 Orquestas Juveniles: http://nicodemo.nireblog.com/post/2007/10/18/musica-como-arma-de-cambio
 Gustavo Dudamel: http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Dudamel